प्रतिबन्धित लागूऔषध सहित दुई जना पक्राउ – onlineyuba
२०७७ कार्तिक ४, मंगलवार १४:३२
झापा, ४ कार्तिक । लागूऔषध कारोबारमा संलग्न दुई जनालाई प्रहरीले मोरङको विराटनगरबाट पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले उनीहरुलाई विराटनगर महानगरपालिका –१६ स्थित दरैया एरियाबाट प्रतिबन्धित लागुऔषध सहित पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा विराटनगर–१५ रानीका ३१ बर्षीय शम्भु साह र ३० बर्षीय बिकी राई रहेका छन । विशेष सुराकका आधारमा १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको अनुसन्धान समुहबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनिहरुलाइ पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरुको साथबाट प्रहरीले ६२ बोतल डाईलेक्स डिसी, १८७ ट्याब्लेट नाईट्रोजन र २३८ ट्याब्लेट एसपी प्रोक्सिभन लागूऔषध सहित मंगलवार अर्थात आज बिहान सवा ४ बजे पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले कानुनी कारबाही अगाडी बढाईएको छ ।
संसद अधिवेशन आह्वान कहिले ? सरकारलाई कुर्सी जोगाउँनै छैन फुर्सद, प्रतिपक्ष चाँही किन मौन ?
थन्क्याइएको अलैँची बिक्री भएपछि इलामका किसान हर्षित
रंगेलीको संसारी माई मन्दिरलाई प्रदेश सरकारको १० करोड बजेट
बिहिबार र सुक्रबार भिटामिन ए खुवाईदै